Ibhranti yakho njengePlanethi-uMqeshwa weNtlalo | Martech Zone
Ibhranti yakho njengePlanethi-uMqeshwa weNtlalo
NgoLwesibini, Novemba 5, 2013 NgoMvulo, Novemba 4, 2013 Douglas Karr
Sasinovuyo xa sasibona Wonke umntu kunye nokubanakho ukusebenzisa abasebenzi bakho ukunceda ukwandisa ilizwi lenkampani yakho kodwa siyothuswa yindlela ezithule ngayo iinkampani ezininzi. Siyaqonda ukuba abanye abasebenzi abaqhagamshelekanga, kodwa xa sibona iimpendulo zempendulo ezivela kwinkampani enamakhulu abasebenzi, siqala ukuzibuza ukuba yintoni enye engalunganga.
In Umqeshwa wezeNtlalontle: Zingaphi iiNkampani eziNkulu ezenza ukuba iMithombo yeendaba yeNtlalo isebenze, Intengiso eBlue Focus ihamba emva kweziqendu kunye neempawu ezihamba phambili-ezifana ne-IBM, i-AT & T, i-Dell, i-Adobe, i-Southwest Airlines, i-Cisco, i-Acxiom kunye ne-Domo-ukutsala isiciko kumabali okuphumelela kwezentlalo eziqhubele ezi nkampani kwinkulungwane yama-21. Ezi mpawu zinqabileyo zonke ziye zaqonda ngokufanayo: indlela eya kwishishini lezentlalo ilele ngokuxhobisa umqeshwa wentlalontle.
Hamba uhlole Umqeshwa kwiNtlalo iphepha lokufika kwaye ubambe isahluko sesampulu!